Warshadda Qashinka Shiinaha ee Burburka Qashinka iyo soosaarayaasha | LYBH
Burcado jeex jeex jeex jeex jeexan ah
Qalabka wax lagu jaro oo laba-dhudhun caqli badan leh wuxuu leeyahay astaamaha xawaaraha hoose iyo xuddunta waaweyn, kaas oo burburin kara taayirada qashinka ee dhammaan noocyada kala duwan isla markaana hubin kara hawlgalka muddada dheer ee xasilloonida qalabka. Qalabka jarista waxaa laga sameeyaa bir daawaha ka sameysan oo sare oo laga keenay Yurub, qaab dhismeedka jarjarka laba jibbaarada ah waxaa loogu talagalay bedel la kicin karo, kaas oo hagaajinaya heerka isticmaalka qalabka goynta. Burbur dhab ah iyo burburin dhab ah ayaa lagu farsameeyaa aagag kala duwan oo shaqeynaya isla sanduuqa mindi isla waqtigaas si loo badbaadiyo isticmaalka tamarta loona isticmaalo booska.
Kala sooca siligga
Iyada oo loo marayo mindi dhaqaajinaysa iyo mindi go'an oo lagu jarayo xabagta xabagta, walxaha caagga ah ee aqoonta u leh iyo silig bir ah oo loo maro shaandhada, qaybaha caagga ah ee aan u qalmin iyo silig bir ah ayaa sii wadaya inay ku sii jiraan aagga wax lagu burburinaayo; Shaashadu waxay ka dhigeysaa dayactirka iyo bedelida qalabka jarista iyo shaashadda mid aad u habboon. Naqshadeynta hore iyo gadaal ee midi dhaqaaqaysa iyo mindi go'an ayaa ogaan kara isbeddelka afarta gees ee goynta ah iyo hagaajinta nolosha adeegga qalabka. Qalabka dayactirka ee silig-koronto goynta, waana la isticmaali karaa wali dayactirka ka dib.
Qalabka dusha sare ee qalabka qalabka waxaa lagu daaweeyay derusting, kaas oo buuxin kara shuruudaha ka hortagga-daxalka ee hawlgalka muddada dheer ee qalabka ee ku hoos jira jawi gaar ah sida wasakhda qashinka. Waxay leedahay hawlo xakameyn caqli leh sida bilow iyo joogsi fog, joogsi deg deg ah, xawaare iyo culeys xad dhaaf ah.
Adoo adeegsanaya mabda'a shaqada ee kala duwida cajaladaha si loo kala sooco waxyaabo kala duwan oo kala duwan oo loogu talagalay baaritaanka maaddada, shaashadda hoose waxaa lagu heli karaa iyadoo la hagaajinayo farqiga u dhexeeya maqaarka si loo buuxiyo shuruudaha soo deynta cabbirka walxaha Shaashadda weyn ee ka soo bixi weyda shuruudaha waxaa dib loogu celin doonaa nidaamka wax lagu burburiyo ee dib-u-jajabinta illaa ay ka buuxineyso shuruudaha soo deynta cabbirka cabbirka. Saxanka waxaa laga sameeyay walxo polymeric ah oo la soo dhoofiyay oo aan sahlaneyn in la waxyeeleeyo waxaana loo isticmaali karaa dhammaan noocyada xaaladaha shaqo ee xun. Isla mar ahaantaana, naqshadeynta qaabdhismeedka caqli-gal ah iyo debecsanaanta hagaajinta awoodda wax-qabadka, si qalabka ku jira habka baaritaanka ay ugu dhowdahay inuu uruuro ama wareego, dayactirka qalabka ayaa ka fudud oo dhakhso badan.
Nooca kala-soocayaasha magnetka waa nooc iskiis u sii deynaya oo si joogto ah u shaqeeya, kaasoo si wax ku ool ah u baari kara silig bir ah ka dib kala-soociddiisa.
Siligga birta ah waxaa laga soocay siligga weyn ee siligga / silig birta ah oo gariir leh. Kaliya birta / budada birta ah ee siligga birta ah ee fiican ayaa buuxisa shuruudaha ka gudbi kara shaashadda shaashadda birqaya. Dhagaxyada waaweyn ee cinjirka ah ee aan ka dhex mari karin shaandhada iyo siligga birta ah ayaa mar labaad lagu qaadayaa suunka gaadhiga ee loo kala saarayaa siligga birta ah ee loogu talagalay burburka labaad illaa laga gaadhayo heerka.
Nidaamka xakamaynta korantada
Golaha xakamaynta ee ugu muhiimsan iyo barxada xakamaynta way ka madax banaan yihiin midba midka kale. Naqshadaynta shaashadda taabashada iyo habka xakamaynta badhanka ayaa ka dhigaysa is-dhexgalka xakamaynta mid aad u dadnimo badan oo hawl yar. Qaabka otomaatiga ah wuxuu xaqiijin karaa hawlgal aan cidna wadin, qaabka gacanta ayaa xakamayn kara hal qalab, dadka isticmaala waxay dooran karaan qaabab kala duwan oo ay ugu shaqeeyaan si waafaqsan baahida dhabta ah wakhti kasta. Isla mar ahaantaana, nidaamku sidoo kale wuxuu leeyahay dhawaaqa iyo iftiinka iftiinka, xusuusin cillad muuqaal ah, xusuusin dayactir qalab iyo shaqooyin kale oo caqli leh, sidaa darteed dadka isticmaala habka qalabka ay u xakameynayaan si sahlan oo dhakhso leh, helitaanka waqtiga iyo la tacaalida cilladaha, dhammaystir dayactirka shaqo. Qalabka kormeerka fiidiyowga ee buuxa wuxuu la xiriiri karaa nidaamka xakamaynta dhexe wuxuuna la socon karaa xaaladda socodka qalabka waqtiga dhabta ah.
Naqshad qaabeed, raad yar
Khadka qalabka wuxuu raacayaa mabda'a isticmaalka dhulka ee macquul ah oo xasaasi ah, wuxuu qaataa qaabeynta qaabdhismeedka isku dhafka sheer-birta laba-dhudhunka ah iyo shaashadda giraanta giraanta, iyo qaabka macquulka ah, oo aan kaliya hubin karin wax soo saarka iyo sii deynta cabbirka shuruudaha, laakiin sidoo kale la kulmo qorshaynta iyo baahiyaha dhismaha ee soosaarida iyo maaraynta qashin qaadista macaamiisha.
Naqshadeynta kiiska midida aan caadiga ahayn, mid deggan oo lagu kalsoonaan karo
Ka dib daaweynta kuleylka, sanduuqa aaladda waa mid adag oo xiran-diidmo, taas oo hubineysa xoog farsamo wanaagsan, waxay dheereyneysaa nolosha adeegga qalabka, waxayna si wax ku ool ah u yareysaa kharashka dayactirka.
3.Middiyo go'an oo madaxbanaan, furfurnaan xoog leh
Qalajiyaha kasta oo go'an waa la kala jari karaa oo si madax-bannaan ayaa loo rakibi karaa, taas oo la jajabin karo oo si dhakhso leh loogu dhammayn karo muddo gaaban, taas oo si weyn u yareyneysa culeyska shaqada ee shaqaalaha iyo hagaajinta sii wadida wax soo saarka.
Naqshadeynta qalabka 4.Unique, fududahay in la ilaaliyo lana beddelo
5.High dunmiiqa sare, iska caabin daal xoog leh iyo caabbinta saamaynta
Dunmiiqa wuxuu ka samaysan yahay bir dahaaran oo xoog badan. Kadib daaweyn badan oo kuleyl ah iyo farsamooyin sax ah oo sareeya, waxay leedahay awood farsamo oo wanaagsan, daal xoog leh oo anti-daal iyo saameyn anti-saameyn iyo nolol adeeg dheer ah.
6.Warbixinno la soo dhoofiyey oo leh xirmo isku dhafan oo isku dhafan
Soo dejinta iyo xirmo isku dhafan oo badan, caabbinta culeyska sare, nolosha dheer, boodhka, biyaha iyo antifouling, si loo hubiyo hawlgalka joogtada ah ee xasilloon ee mashiinka.
d. Wasakhda adag: adag ka dib pyrolysis-ka waa fiilooyinka kaarboonka madow iyo birta ceyrsan oo si qoto-dheer loo baaraandegi karo ama loo iibin karo
si toos ah qiimaheeda.
Hore: Qalabka Burburka Caaga
Xiga: Qalabka Mashiinka Mashiinka Kaarboonka
Qiimaha Gawaarida Gawaarida
Burburinta Taayirada Rubber
Mashiinka Xashiishka Birta ah
Khadadka Dib-u-warshadaynta Taayiradda
Qiimaha Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada
Warshad Mashiinka Taayirada
Qiimaha Mashiinka Taayirada
Qashinka Mashiinka Mashiinka Qashinka ah
Mashiinka Goynta Taayirada Qashinka
Kharashka Qashin Qaadista Taayirada
Khadka wax soo saarka taayirrada qashinka qashinka waa qalab ballaaran oo dhammaystiran oo gabi ahaanba kala soocaya saddexda alaab ceyriin ee waaweyn ee ku jira taayirka: caag, silig bir ah, iyo faybar heerkulka qolka oo ogaanaya 100% dib-u-warshadaynta. Khadadka wax soo saarka taayirka qashinka qashinka ayaa dib u warshadeyn kara taayirrada dhexroorka dhexdiisa ah 400-3000mm iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, iyadoo lagu dabaqayo xoog leh, cabirka wax soo saarka waxaa lagu xakameyn karaa inta u dhexeysa 5-100mm, wax soo saarkuna wuxuu gaari karaa 2 ...
Warshad Pyrolysis joogto ah, Dufcaddii Pyrolysis Plant, Sifee caag ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Taayirada Pyrolysis,